‘श्रीमान बितेको १४ दिनमा मैले रातो लगाएँ’ – एक साहसी महिला – Complete Nepali News Portal
‘श्रीमान बितेको १४ दिनमा मैले रातो लगाएँ’ – एक साहसी महिला
February 23, 2017	10,143 Views
लाउचेली सिन्दुर लाउ
निको पार ह्रदयको घाउ
गायक बद्री पंगीनीको यो गीतले समाजका विधुवा आमा दिदी बहिनीहरुमा श्रीमानको मृत्युपछि सेतै लगाउनु पर्ने भ्रम केही हदसम्म भएपनि हट्न सफल भयो । पितृ सतात्मक राज्यसत्ताबाट प्रताडित आम महिलाहरु श्रीमानको मृत्यु पश्चात अँझै पनि खुलेर रातो कपडा कपडा लगाउन सक्दैनन् । सिन्दुर पोते अनि चुरा त धेरै परको कुरा । श्रीमतीको मृत्यु भएको १ वर्ष नबित्दै श्रीमान अर्का विहे गरेर रमाउछ तर श्रीमानको मृत्यु पश्चात भने श्रीमतीले सेतो पहिरनमा जीवन बिताउनुपर्छ । यो अन्याय हो भनेर महिलाहरुले आवाज नउठाएका पनि होइनन् तर आवाजले मात्रै परिवर्तन असम्भव छ व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । अहिले त हम्मेसी महिलाहरुले श्रीमानको मृत्यु पश्चात रातो लगाउदैनन् भने आज भन्दा करिब १२÷१३ वर्ष अगाडीको अवस्था कस्तो थियो होला ?
समाज परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई आत्मसाथ गर्दै एक साहसी महिला जसले श्रीमानको मृत्यु पश्चात पनि रातै लगाइन र समाजलाई चुनौती दिइन् । ती हुन् पुष्पलता आचार्य । वि.सं २०१५ सालमा लमजुङको रम्घा गाविसमा जन्मिएकी पुष्पलता आचार्यले आफ्नो श्रीमान आत्मराम आचार्यको मृत्यु हुदाँ १३ दिनसम्म अरुले जस्तै गरी काजकिरीया गरीन् । अनि १४ दिनको दिन उनले श्रीमानले उपहार स्वरुप दिएका सिन्दुर, पाते, चुरा लगाइन ।
उनी भन्छिन्– मेरो श्रीमानको मृत्यु २०५९ साल भदौ १६ गते भयो । म त्यसपछि गाउँ गए । त्यहाँ सासु ससुरा सँगै बसेर श्रीमान बितेको १३ दिनसम्म काजकिरीया गरेँ । त्यतिखेर म ४४ वर्षको थिएँ । चौध दिनमा घरमा सत्यनाराणको पूजा थियो । सबैले पहेलो टिका लगाए तर मैले रातो ! सबैजना छक्क परे कसैले मुख फोर्न सकेनन् त्यसपछि म काठमाण्डौ फर्किए । श्रीमान वित्नुपूर्व मैले लगाएका सबै चिज लगाएँ । सिन्दुर पोते, टिका, चुरा इत्यादी । त्यो देखेर मेरी आमा बेहोस हुनुभयो । उहाँ होसमा आएपछि बिस्तारै भन्नुभयो ‘छोरी ४५ दिनपछि लगाएको भए त हुन्थ्यो नी ? आमाले त्यसो भन्दा मैले आमालाई प्रतिप्रश्न गरे ४५ दिनपछि मेरो अर्का श्रीमान को आउँछ ? मेरो कुराले आमा चुप लाग्नुभयो ।
रातो लगाउनुको कारण
म श्रीमानको कान्छी श्रीमती थिए । मेरो सौता दिदी पनि हुनुहुन्छ । छोराछोरी छन् । मैले श्रीमानलाई पहिलै भनेको थिए यदि तपाइको मेरो भन्दा पहिला मृत्यु भयो भने तपाइले दिएको उपहार बाँचुन्जेल जोगाउने छु । चुरा, धागो, पोत, सिन्दुर भन्दा अरु के हुन सक्छ एउटी नारीको लागी श्रीमानको उपहार ? त्यसैले मैले अरु केही गरेको होइन श्रीमानको उपहारलाई उपयोग गरेको हुँ । अनी अर्का कुरा महिला पुरुष बिच जुन किसिमको असमानता छ त्यसलाई चिर्ने मेरो उद्देश्य हो ।
काम राम्रो होस या नराम्रो सुरुवात गर्नेले ताली र गाली खानु स्वभाविक हो । राम्रो काम गर्नेले त आरोपको सामना गर्नुपर्छ भने मैले त पितृसतात्मक राज्यसत्ताको विपक्षमा काम गरेको थिए । आरोप आउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । तर आरोपको सामना गर्न सक्ने की नसक्ने भन्ने ठूलो कुरा हो । त्यसैले आरोप र आलोचनादेखि म कहिलै पनि हतास भइन । मलाई थाहा थियो की मैले गलत काम गरेको होइन । एकदिन यही समाजले यो कुरालाई स्वभाविक ठान्नेछ भन्ने लाग्थ्यो । विस्तारै त्यो पनि हुदै गएको छ । अहिले मेरो कदमको चौतर्फि स्वागत भइरहेको छ यसमा नै आनन्दित छु ।
आजभोली साहित्य सँगसँगै समाजसेवामा व्यस्त छु । साथै विधुवा महिला दिदीबहिनीहरुलाई रातो लगाउने अभियानमा पनि छु । आजसम्म कुनै संस्था खोलेर होइन व्यक्तिगत रुपमा यो काम गरिरहेको छु । अहिले लमजुङमा पुष्पलता बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको छ त्यसमा मैले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरे । त्यसैगरी पुष्पलता पुस्तकालय छ । अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुमा सहयोग गर्दै आइरहेको छु ।
आम महिलालाई शन्देश
सबैभन्दा पहिले आम दिदीबहीनीहरुलाई मेरो पहिलो आग्रह हो आत्मनिर्भरताको बाटो रोज । यदि आफु आत्मनिर्भरताको लागि आफै सक्षम भयो भने कसैले केहि गर्न सक्नेवाला छैन । जति जति हामी अरुमा परनिर्भर हुन्छौ त्यति नै हामी अन्याय र थिचोमिचोमा पर्छौ । त्यसैले आत्मनिर्भर हुन सिकौँ सकारात्मकताको बाटोमा अघि बढ्न कहिले पनि नहिचकिचाउँ ।
संसार न्यूज/प्रस्तुती: संगीता पनेरु
– हाम्रोसंचार बाट